လူဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအောက်မှာ မျက်နှာပါတယ် ခေါင်းပါတယ် ခန္ဓာကိုယ်ပါတယ် ခြေတွေလက်တွေ စသဖြင့် အကုန်နီးပါးတူညီကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဓါတ်တွေ ခံယူချက်တွေ ကြီးပျင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မူတည် ပြီး လူအမျိုးအစား ကွဲပြားသွားပါတယ်။
(၁) Full Stop. လိုလူမျိုး
Full Stop. ဆိုတဲ့အတိုင်း ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာ ဘ၀ မှာ ရပ်တန့်နေတဲ့ လူမျိုးတွေ၊ ပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့ လူမျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်မသွားတော့ ဘူးဆိုပြီး၊ စိတ်ဓာတ် ခွန်အား နည်းတဲ့ လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ လူကသာ အသက်ရှင်နေပေမယ့် စိတ်ဓာတ်တွေ သေဆုံး နေတယ်လို ပြောရမယ့် လူစား မျိုးပါ။
ဘ၀ကိုလက်မြှောက်အရှုံးပေးတယ်။ ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရလို့ “ဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်ကွာ” ဆိုပြီး ဘ၀ကိုရေဆန် မျောလိုက်သူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချို့က သင်ယူ သင်ကြားခြင်း (Learning) ကို ရပ်တန့်ပစ်လိုက်တယ်။ တစ်ချို့က ကိုယ့်ရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း တွေ အဆင်မပြေတဲ့ အခါမှာ လုပ်ငန်း တွေကို ရပ်တန့်ပစ်တယ်။
စီးပွားရေး ၊ လူမှုရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ အချစ်ရေး အဆင်မပြေလို့ ကိုယ့်ဘ၀ကို လမ်းဘေးပို့ပစ်တဲ့ လူတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အောင်မြင်မှုလမ်း ကို လျှောက်လှမ်းနေတဲ့အခါမှာလည်း ဇွဲမရှိဘဲ လက်လျှော့ရပ်တန့်ပစ်တတ်တယ်။ ဘယ်အရာကိုမှ ပြီးမြောက်အောင်မြင်အောင် မလုပ်နိုင်၊ ဆုံးခန်း တိုင်အောင် မလုပ်နိုင်ဘဲ လမ်းတစ်ဝက်မှာ ရပ်တန့်ပစ်လေ့ရှိကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သူတို့တွေဟာ လက်ရှိဘ၀ အခြေအနေ လေးကိုပဲ လက်ခံပြီး ဆက်လက် တိုးတက်ဖို့ မလုပ်ဆောင်တတ်ပါဘူး။ လက်ရှိ နေရာလေးမှာပဲ ရပ်တန့်နေတတ်ပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှု မရှိဘူး။ အားငယ်တတ်တယ်၊ သိမ်ငယ်တတ်တယ်။ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ မတတ်နိုင်ဘူး၊၊ မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ အမြဲပြောတတ် ဆိုတတ်တယ်။
ကံကိုပဲအပြစ်ပုံချတတ်ပြီး ဉာဏ်၊၀ီရိယကိုအားမကိုးဘဲ နေတတ်တဲ့လူမျိုးတွေ Full Stop လူသားထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်ဖြစ် ကံပဲလေဆိုပြီး အတိတ်ကံပေါ်မှာ အပြစ်ဖို့နေ ပြီး ငုပ်တုတ်ထိုင်နေတတ် ကြပါတယ်။ ဒီလို ထိုင်နေရုံနဲ့ ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် လူအများကလည်း သူတို့ကိုတွေ့ရင် ““ဆန်ကုန် မြေလေးပဲ””လို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
အဆိုးဆုံးရပ်တန့်ခြင်း Full Stop ကတော့ မိမိ ရဲ့ ဘ၀ ကို မိမိ အဆုံး သတ်ပစ်လိုက်ခြင်းပါပဲ။ လောကကြီးမှာ ဆက်လက်ရှင်သန်လိုစိတ် မရှိဘူး။ အသက်ရှင်နေလို့လည်း ငါ့ ဘ၀ ကဘာမှ မထူးပါဘူးဆိုပြီး၊ ကိုယ့်ဘ၀ကို အဆုံးစီရင်ပစ်တဲ့ Full Stop ကတော့ အဆိုးဆုံး အခြေအနေပါပဲ။
တစ်ချို့ Full Stop လူမျိုး တွေကတော့ ကိုယ်တိုင်ရပ်တန့်နေရတာ အားမရသေးဘူး။ တခြားသူများကို ရပ်တန့်ပစ်ဖို့တိုက်တွန်းကြတဲ့ သူတွေရှိပါတယ်။ “ဒီအလုပ်မျိုး ငါလုပ်ဖူးတယ်၊ အဆင်မပြေပါဘူးကွာ၊ မင်းလည်းလုပ်မနေနဲ့၊ မဖြစ်နိုင်ဘူး” လုပ်မနေပါနဲ့ကွာ၊ ရှုံးသွားရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ” စသဖြင့် လိုက်လံပိတ်ပင် တားဆီးတတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ကလည်းရပ်တန့်နေရတာကို သဘောကျပြီးသူများ ကိုလည်း ဆက်မသွားစေချင် ကြသူတွေပါပဲ။
ဒီလောက်ဆို Full Stop ဆိုတဲ့ ပထမ လူစားမျိုးဟာ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေ လည်းဆိုတာ သဘောပေါက် လောက်ပါပြီ။ လူ့ပတ်ဝန်းကျင် မှာ ဒီလိုလူတွေများလာရင် တိုးတက် မှုတွေ နှောင့်နှေးနေဦးမှာပါပဲ၊ ဒီလိုလူတွေဟာမိမိကိုယ်တိုင်ရော၊ နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက်သာမက လောကကြီးကိုပါ ရပ်တန့်ခြင်းတွေဖြစ်စေနေဦးမှာပါ။
နောက်ထပ်လူအမျိုးအစား တွေကိုလည်း ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။
Read 7584 times Last modified on Thursday, 09 May 2019 10:07
ထိုင်းနိုင်ငံ Chulalongkorn University မှ အာဆီယံနိုင်ငံသားများအတွက် ပညာသင်ဆုပေးအပ်မည်
ကျောင်းဆရာကောင်းတစ်ဦးမှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး
Organization And Human Resource Governance နှင့် Public Policy And Development ပါရဂူဘွဲ့ ပညာသင်ဆုများခေါ်ယူ
သြစတြေးလျပညာရေးလမ်းကြောင်းကို British University College က တစ်ဆင့်တက်ရောက်နိုင်
PK English Language Training Centre